मुलुक यसरी नै चल्ने हो ?
समाचारमा हल्लीखल्ली छ– प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला गोगुलप्रसाद बास्कोटा पेरि मन्त्री हुँदैछन् । छपाई सम्बन्धि मेसिन खरिदमा ७० करोड कमिशनको मोलतोल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्रीबाट खोसुवामा परेका बास्कोटाकोमुद्दा अख्तियारबाट समेत तामेलीमा राख्ने चाँजोपाँजो मिल्ने भइसकेपछि बास्कोटा अव हुने मन्त्रिपरिषदको फेरबदलमा र बिस्तार कार्यक्रममा पुनः शक्तिशाली मन्त्री हुनेछन् ।
आफूलाई प्रधानमन्त्रीको नजिकको व्यक्ति भनेर चिनाउन रुचाउने महानुभावहरुले सार्वजनिक गरिरहेको चर्चा हो यो । अझ तीमध्ये एकथरिले त बास्कोटालाई अर्थ मन्त्रालय नै जिम्मा दिइने भनेर पनि गफ चुटे । पार्टिभित्रको आन्तरिक खिचलोलाई साम्य पार्न र नेकपाका नेतागणलाई भाग पु¥याउन भनेर गरिन लागेको मन्त्रिमण्डल फेरबदल र बिस्तारमा आमचुनाव हारेका नारायणकाजीर वामदेव गौतमलाई पनि उपप्रधानमन्त्रीको हैसितमा स्थापित गरिने भनेर चर्चा बाक्लिएको छ ।
प्रचण्ड, माधव नेपालदेखि लिएर झलनाथ खनालसम्मका मान्छेहरुले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा सिट पाउने भन्ने चर्चा बिगत केहीदिनदेखि खलिरहेको । कस्तो मुलुक, कस्ता हामी नेपाली ? आमनेपालीहरु अहिले बिमारीका कारण पर्याप्त समय दिन नसकेका भन्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्ने जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेको चर्चा गर्न व्यस्त छन् । तिनै जनताले आफ्ना प्रधानमनत्रीले गम्भीर रोग र गम्भीर आरोपहरु भोगिरहदासमेत पदमा किन टाँस्सिएर बसेको भनेर प्रश्न गर्न सक्दैनन् । यति समूह, ओम्नी समूहदेखि लिएर वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, एनसेल भ्रष्टाचार काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण आदि इत्यादि सबै बिर्सिदिने नेपाली गजबको जाति हो ? यी यावत काण्ड बिर्सिनु मतलव यी भ्रष्टाचारी, दूराचारीहरुले उन्मुक्ति पाउनु हो । किनभने अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरु त सरकारको पकेटको निकाय बनेको छ । अव नेपाली जनताले पनि बिर्सेर उन्मुक्ति दिएपछि यिनलाई के चाहियो र ? देश र जनताप्रति गैह्रजिम्मेवार यिनीहरुलाई दण्ड दिने त परै जाओस् लगाम कस्ने समेत कोही नहुने भए । यहीकारण सरकार र नेताहरु छाडा साँढे बनेका छन् ।
भ्रष्टाचार, नातावाद, व्यभिचार, कृपावाद चरम सीममा छ । बेला बेलामा राष्ट्रवादको चर्चा गरेर प्रधानमन्त्री ओली नेपालीको आँखामा भ्रम छर्न सिपालु छन् । कालापानीको मुद्दा त्यो कब्जा गरिएको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि उठाइएकै होइन भन्ने जो कसैले अनुभूत गर्न थालेका छन् । यसैले त शान्त कूटनीतिबाट फिर्ता ल्याउनुपर्ने भूभागलाई गालीगलौज, बेइजत गर्दै, अनावश्यक हल्ला गर्दै उठाउनेको मतलव नै कागजी रुपमा कालापानीलाई फिर्ता ल्याए पनि वास्तविक रुपमा त्यो भारतलाई नै सुम्पिरिाख्ने रणनीति हो । शक्ति प्रदर्शन गरेर फिर्ता ल्याउन नसक्ने मुलुक नेपालले कूटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्नुपथ्र्यो । त्यो गरिएन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भारतलाई बेइज्जत गर्ने काम गरियो । फिर्ता ल्याउने कार्य एक इन्च पनि अगाडि बढाउन सकिएन । भारतले यस विष्यामा कुरा गर्नसमेत चाहेन । नेपालले वार्ताको टेवुलमा ल्याउनै सकेन । यता ओलीले यस्तै एकदुई राष्ट्रियताको कुरा उठाएर आफ्नो र आफ्नो टिमले गरेका अरवौं अरवका भ्रष्टाचार काण्डलाई छोप्न र जनताको नजरबाट लुकाउन सफल भइरहेका छन् । एकथरिको विचारमा यो ओलीको सशक्त रणनीति हो ।
राष्ट्रियताको कुरा उठाएर आफ्ना सम्पूर्ण भ्रष्टाचारर असफलतालाई ओझेलमा पार्नसक्नु ओलीको चातुर्यता हो । स्वास्थ्य सम्बन्धि खरिद कार्यमा भ्रष्टाचार लापरवाह िभयो भन्दै एकथरि युवाहरुले इनफ इज इनफ भन्ने अभियान चलाए । लक डाउनका समयमा पनि बालुवाटार र माइतिघर मण्डलामा विशाल जनप्रदर्शन गरियो । तर नतिजा ? अनसन समेत बसेका थिए । उक्त इनफ इज इजफ आन्दोलनका युवाहरु पूर्व युवराज पारसदेखि समाजका लव्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुसमेत अनसनकारीलाई भेट्न पुगे । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख विपक्ष नेता शेरबहादुर देउवासमेत भेट्न पुगे । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खुबै चर्चा पायो । तर चर्चा चर्चामै सिमित हुनपुग्यो । पदबाट खुस्किनुपर्ने आज कि भोलि भइरहेका बेलामा समेत चिनियाँ राजदूतलाई कजाएर आफू बचाउन सक्ने ओलीको क्षमता अभूतपूर्व लाग्छ । ओली क्षमता भएका नेता हुन् तर त्यो क्षमता राष्ट्र र जनताको पक्षमा देखिएन । यसकारण ओलीको टिम असक्षम भइसक्यो । निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने ओली लगायत लगभग पुरै टिम भ्रष्टाचारमा जाकिन्छ । तर गर्ने कसले ? छानबिन गर्ने सबै निकायमा उनकै टिम छ, राजनीतिकरण भइसकेको छ ।
कोभिड– १९, कोरोना भाइरसको महामारीलाई समेत कमाउने अवसर बनाउने ओली टिम जनताको विश्वास गुमाइसकेको छ । सरकार अरवौं खर्च भएको तथ्याङ्क दिन्छ, जनता मरिरहेछन्, डाक्टर मान्छे मरेको टुलुटुलु हेरिरहनु प¥यो भनेर दिक्क मान्छन् । कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न एकप्रकारले सरकारले हात उठाइसकेको छ, कोरोना समुदायमा फैलिसकेको छ । जनताले आफ्नै सावधानीले बच्नु र बचाउनु बाहेक अर्को बिकल्प छैन । सरकार जवाफदेही हुनसकेन । यसकारण सबैको मुखमा एउटै कुरा छ– गणतन्त्र अफाप भयो । नेपाली सेना अपमानित गर्ने रक्षामन्त्रीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई उजुरी गरेर बसिरहेको छ । कडा रुपमा देखिएन । भ्रष्टाचारी पदासीनहरुलाई ठेगान लगाउनसक्ने कोही देखिएन । यस्तो लुटतन्त्रको विरुद्धमा उभिनसक्ने माइकालाल कोही छैनन् ? आँट कसैमा देखिदैन । हाम्रो सेना संविधानको आदेशमात्र मान्ने रे ? देश र जनताको जिम्मेवारीबाट सेना यसरी पन्छिन सक्छ ?
विश्वमा बेसारको माँग बढोस् कि प्रचण्ड र ओलीको कुरा मिलोस्, यो जनताको सरोकारको विषय होइन । जनताले खोजेको नैतिकता र जवाफदेहीता हो । यी दुबै कुरा नेकपाको सरकारले दिन देखाउन सकेन । यसकारण अव जनताले बिद्रोह गर्ने बेला आयो । अन्यथा अकालमा मर्नुको विकल्प छैन ।